Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomiyaha HAAJ oo Kulankii 4aad Qabtay & Madax Kasoo Qaybgashay.
Gudoomiyaha HAAJ oo Kulankii 4aad Qabtay & Madax Kasoo Qaybgashay.
Posted by Dulmane	/ September 25, 2017
Gudoomiyaha Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Jaaliyaadka (HAAJ) mudane Maxamed Rashiid Sh Cabdulaahi ayaa qabtay kulamkii 4aad oo dhinaca khadka isgaadhsiinta ah oo ay ku kulmaan madax katirsan Jabhada JWXO iyo Jaaliyaadka Soomaalida Ogadenya.
Kulankan oo qabsoomay maalin nimadii shalay oo Axad ahayd ayaa ahaa mid aad muhiim u ah waxaana kasoo qayb galay qaar kamid ah madaxda Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia iyo mas’uuliyiinta Jaaliyaadka JWXO ee qaaradaha aduunka.
Ugu horaynba kulanka waxaa furay Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Jaaliyaadka mudane Maxamed Rashiid Sh Cabdulaahi wuxuuna salaan iyo isbarasho kadib kusoo dhaweeyay Hogaanka Arimaha Ururka ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO mudane Xuseen Nuur, wuxuuna hogaanku soo jeediyay khudbad aad udheer oo inta badan kahadlaysay arimaha ururka iyo xaalada hada lagu jiro iyo sida ladoonayo in cadawga loola faltamo.
Mudane Xuseen Nuur Hogaanka Arimaha Ururka (HAU) JWXO ayaa dhanka kale mas’uuliyiinta Jaaliyaadka lawadaagay xogta ay kahayaan halyaygii cadawga loodhiibay Naftiihure Cabdikariim Sheekh Muuse.
Sidoo kale waxaa lagu soo dhaweeyay aqoonyahanka wayn ee ree Ogadenia Dr Maxamuud Ugaas, wuxuuna mudane Maxamuud in badan kudheeraaday xaalada dhabta ah ee gumaysiga madow ee Abasiiniya iyo kooxda taag iyo tabarba beeshay ee TPLF.
Sidoo kale mudane Dr Maxamuud oo cabiraya aqoonta durugsan ee uu uleeyahay xukuumada wayaanaha ayaa jaaliyaadka lawadaagay dhagarta uu gumaysigu shacabka dulman ee ree Ogadenia lagaadi jiray iyo waliba dhagarta cusub ee hada uu damacsan yahay.
Intaas kadib madaxda Jaaliyaadka ee shirka kasoo qayb galay ayaa dhankooda warbixino dhaadheer kakeenay jaaliyaadkooda iyo deegaanada ay kahowl galaan, waxayna mas’uuliyiinta Jaaliyaadka madaxda waydiiyeen Su’aalo aad ubadan oo arimaha halganka laxidhiidha.
Dhinaca kale Mudane Xuseen Nuur iyo Halgame Dr Maxamuud Ugaas ayaa siwaafi ah uga jawaabay dhamaan su’aalihii ay jaaliyaadku dabayeen. Wuxuuna gunaanadkii kulanku kusoo dhamaaday jawi aad udagan.